Home Wararka Burcadka Fahad, Farmajo iyo Kooxda kula jirta Fal Dambiyeedyda soo Dhacayey ilaa...
Burcadka Fahad, Farmajo iyo Kooxda kula jirta Fal Dambiyeedyda soo Dhacayey ilaa 2017 Waa lala Xisaabtami Doonaa
Sida runtu tahay dalka waxaa ku socda dhiigbax dhinacyo badan leh. Mid amni oo inta qofka sida la xoolaha la iska soo qabsado la iska dilo, kadibna guddi beenaad loo saaro, xoolaha dadka oo la dhaco, gabdhaha yaryar oo la afduubto, qofkii wax yar oo sir ah inuu ogyahay la ogaado oo la khaarijiyo iyo tacaddiyo ciiddaas ka badan oo joogto ah ayaa maalin walba ay dalka ku sameeyaan Farmajo iyo Fahad.
Ogaada waxaa labadaan mujrim dambiga aadduun iyo ka aakhiraba la qaadaya dadka maata leh waxaa wax wanaagsan wada ama sameeyey Farmajo iyo Fahad, taariikhdana way qormeysaa qofkasta oo jariimada dhaceysa ee KUfsiga, afduubka, Dilka, dhaca hantida iyo tirtirka raad dembiyeedka kala qeyb qaadata Farmajo iyo waa in loo qoolaa marka ay taariikhdu isasaxdo.
Waxaa muuqata in shacbiga Xamar deggan oo uu islaam ahaan iyo niyad ahaanba uu dhintay oo aysan kala soocan xumaanta laga dhiidhiyo iyo waxa loo kala kaadiyo. Maalin walba waxaa maqleysaa intaas oo qof oo awooddi dowladda lagu dhibaateeyey oo weli leh dowladda waxaan ka rabnaa caddaalad. Goormey dawladi dhimatay, waa sheekadii Nabi suleymaan iyo jinnigii u adeegi jiray oo sannado badan hawlihii adeegga waday, kadib markii uu dhintay Nabdi Soleyman cs.
Dowladdii NN mar hore ayey dhimatay waayo dowlada waxay leedahay hay’ado isla xisaabtama oo xumaanta kala ceshada, waxa hadda Xamar ka jiraa waxaa burcad tuugo ah oo dhac ku heshiisay, waxayna u baahan tahay in saacadoyar ay madaxdtooyada ay qolo kale la wareegto, waxaana lagula wareegi karaa socod oo xataa hub uma baahna. Dalku waxaa uu ku socdaa been iyo xaaraan is biirsaday. Fahad iyo Farmajo maaha dad wax xukumi karaa ee waxaa u xukuma damiir li’ida shacbiga, dareenxumada Mucaaridka, dameerada dhergay ee duubabaka ah iyo diin la’aanta wadadaada duub weynta ee hoteellada Muqdisho ku raaxeysta.
Waxaa dadka Xamar lagu seexiyaa waxaa loo saaray guddi.
24 kii Julay 2019 Waxaa la dilay guddoomiyihii Gobolka Banadir Eng. Yariisow waxaa loo saaray guddi soo baara dilkiisa, wax war ah sooma ay celin.
Waxaa dalka Erateriya lagu shubay dhallinyaro Somaliyeed oo markii dambana laga iibsaday Itoobiya waxaa loo saaray guddi soo baara weli waxba sooma celin.
Waxaa la afduubtay waa inta la og yahaye gabar Somaliyeed oo dhallinyaro ah oo gabadhaada oo kale ah Ikran Tahliil iyadoo waliba la ogyahay ciddii afduubatay guddi baa loo saaray soo baara.
Waxaa tiro aan xad lahayn oo dhallinyaro quud raadis ah oo Bajaajley ah lagu dilay Xamar cidi isma warsato, waxaana u dabeeyey in maanta la leeyahay taliyaha saldhigga H/Wadaag uu wiil Bajaajle ah soo xertay, kadibna nafta ka jaray kadibna iyadoon la ogeyn wixii kale oo uu ku sameeyey kabihiisii lagu aasay, iyadoo dadkiisii ay ku baryotamyaan waxaan NN ka rabnaa caddaalad.
Waa maxay ujeedada guddiga loo saaro:
In dambiga la isaga duwo oo dadka meel kale loo saariyo sida uu hadda Fahad sameynayo afduubka iyo Tacadiga Ikran si loo yiraahdo jinni ayaa afduubtay ee Fahad, Kullane iyo Farmajo maaha.
In waqtiga lagu dheereysto oo xaalka dhabtiisa ay soo baxdo marka ay dalka ka caraaraan kooxdaan burcadda ah, kadibna dowlado shisheeye laga doondoono, inkastoo dunida aysan jirin meel ay ku gabban karaan gabood falayaasha.
Runtii waa naxdin xanuun badan meesha ay kooxdaan dalka gaarsiiyeen, waxayna ahayd war haddaad dhimato geeridu marbey nolosha dhaantaaye iska dhiciya oo iska dul qaada.
Dhinaca kale, madaxda Dowlad Goboleedyada lug jiidaya doorashada iyo kuwa raba inay Farmajo iyo Fahad u soo boobaan kuraasta waxaa haboon in hadda laga hortago. Mucaaridka maanta fiirsanaya khaldaadka berri markey Farmajo iyo Fahad soo aruursadaan codad xaaraan ah oo ay rabaan inay dalkaan u dhameystiraan inta u dhiman dhimasho iyo burbur dood waxba ma tareyso. Maanta ayaad wax diidi kartaan oo aadan qori u baahneyn berri qori ayey u baahaneysaa, haddii la qaatana ma ogid inaad adiga badbaadeyso.